Tababarkii Xisaabaadada Iyo Hanti-dhawrka Oo Lasoo Gabagabeeyay - Cakaara News
Tababarkii Xisaabaadada Iyo Hanti-dhawrka Oo Lasoo Gabagabeeyay
Jigjiga( cakaaranews ) Sabti 9ka April 2016, Waxaa maanta si habsi leh loo soo gunaanaday tababar loo hayay xisaabaadada iyo hantidhawrka islamarkaana kasocday kuliyda maaraynta iyo adeega shacbka DDSI. Kaasoo 16 kii cisho ee u danbaysay lagu barayay casharada kala ah qorshaynta miisaaniyada, cadcadaanta iyo isla-xisaabtanka (FTA), maamulka hantida iyo iibka, iyo waliba habka warbixinta nidaamka xisaabaadka.
Hadaba tababarkan xidhitaankiisii ayaa saaka waxaa kasoo qaybgalay Wasiirka Xafiiska Maaliyada iyo Horumarinta Dhaqaalaha DDSI mudane Axmed Cabdi Maxamed oo kasoo jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isagoo hadalkiisii ku bilaabay amaan u aamanay dhalinyartii tababarka qaadanayay islamarkaana isbabardhigay maanta sida uu deegaanku uu horumar uga gaadhay dhinac kasta tusaalana u sooqaatay in maanta deegaanka degmooyinkiisa ay dhaliyar wax-baratay oo master ah kashaqaynayaan. Sidookale wasiirka ayaa sheegay in tababarkan ay ujeedadiisu ahayd sidii loo sii adkaynlahaa nidaamka maaliyadeed ee deegaanka maadaama oo ay deegaanada dalkeena JDFI ay kajirto taratan dhanka maaliyadaha islamarkaana dhawr jeer oo hore uu deegaanku abaal-marino kuhelay kudhaqanka shuruucda nidaamka maaliyadeed.
Dhinaca kale, wasiirka ayaa ku booriyay dhalinyartii tababarka qaadanaysay in cilmigii ay barteen ay ficl ku muujiyaan islamarkaana ay saxaan wixii dhaliil ah ee dhanka shuruucda iyo nidaamka maaliayadeed kajiray. Wuxuuna wasiirku carabka ku adkeeyay in ay tababartayaashani ay yihiin kuwii nidaamka maaliyadeed horumarin lahaa iyo sidookale inay iyagu yihiin kuwii dib u dhigilahaa nidaamka.
Sidookale wasiirka ayaa xusay in tababarkani uusan ahayn kii ugu horeeyay ee la qabto isalamarkaana uusan noqon doonin kii ugu danbeeyay ee laqabto loona baahanayahay qofkasta xafiiskiisii inuu siiwado shuruucdii saxsanayd, kana saxo wixii dhaliil ahaa ee jiray
Wuxuuna hadalkiisii ku gabagabeeyay inay noqdaan kuwa dareen wadaniyadeed leh, mid daacadnimo oo lahaansho ku dheehantahay. Isagoo tilmaamay in ay dhamaantood yihiin kuwo deegaanka iyo dalkaba wax kubaratay galaaska 1aad ilaa heer jamacadeed si bilaash ah oo billaa lacag ah. Islamarkaana Dalka iyo Deegaankuba uu xaq ugu leeyahay inay uga faa iideeyaan cilmigii ay barteen si daacadnimo ah.
Sikastaba ha ahaatee, waxaa isna dhankiisa kahadlay Gadh/W Geedi-socodka Horumarinta iyo Maaraynta ee kuliyada Maaraynta iyo Adaaga Shacabka mudane Faarax Cabdulaahi Abshir oo sheegay in kuliyadu muhiimada ugu wayn ay u samaysan tahay ay tahay kobcinta aqoonta garaadka siyaasadeed ee cududa shaqaalaha iyo waliba ardayda. Wuxuuna intaa kudaray in tababarkani intii uu socday ay casharada bixinayeen macalimiin aqoon dheer u leh nidaamka xisaabaadka iyo hanti-dhawrka iyo waliba siyaasada guud ee ku aadan xisaabaadka.
Ugu danbayna tababartayaashii oo kahadlay dareenkooda ayaa sheegay inay kamidho dhlinayaan casharadii ay barteen uguna adeegayaan bulshda deegaanka si lahaansho leh oo daacadnimo ku dheehaantahay.